Nkọwapụta Ahịa Email | Martech Zone
Ndekọ Ọnụahịa Email
Thursday, January 10, 2019 Sunday, Jenụwarị 13, 2019 Douglas Karr
Email na-aga n'ihu na-eduzi ịzụlite ma na-ejigide usoro nke azụmaahịa ọ bụla n'ịntanetị. Ọ bụ ọnụ, ọ dị mfe itinye ya, ọ bụ atụ, ma ọ dị irè. Agbanyeghị, ọ bụrụ na otu dị iche iche na-eji usoro a eme ihe, ọ ga-enwe mmetụta.
Achọghị spam na-enweghị nchịkwa na ọtụtụ azụmaahịa na-aga n'ihu na-emebi usoro ọrụ nke ndị na-enye email na ndepụta mbubata. Site n'ime nke a, ha na-eweda ha ala aha email nke azụmahịa ha na ozi ịntanetị ka ịbanye na ya, a naghị ahụ ndị debanyere aha ha bara uru. Ha na-aga ozugbo na junk folda.
Dị ka infographic a si dị, Email Marketing site na onu ogugu: A Smart Investment, site na Mgbasa Ozi Mgbasa ozi, ebe a bụ ọnụ ọgụgụ kachasị ọhụrụ na ahịa email:
Banyere 2018, ihe karịrị ijeri mmadụ 3.8 gburugburu ụwa na-eji email. Nke ahụ bụ ọkara nke ọnụ ọgụgụ ụwa!
Ndị ọrụ na-enwekarị karịrị otu adreesị ozi-e, nkezi bụ 1.75.
Ọrụ eziga a mkpokọta 281.1 ijeri ozi ịntanetị kwa ụbọchị, 195 nde na minit ọ bụla.
Mba ise (China, United States, Germany, Ukraine, na Russia) gụrụ ọkara nke ụwa spam ozi.
The nkezi email pịa-site ọnụego (CTR) na North America bụ 3.1%, ọ bụ 4.19% na United Kingdom.
Ikekwe ọnụọgụ email kachasị mkpa akọrọ: ndị ahịa na-abịa na saịtị gị na zụọ site na njikọ email emefu, na nkezi, 138% karịa ndị ahịa ndị ọzọ!
Nke a bụ zuru infographic si otu na mgbasa Ozi Nyochaa:
Tags: nkezi ctremail Marketingọnụọgụ ahịa emailemail emeghe ọnụegoọnụọgụ emailọle ozi ole-na-ntiemeghe ọnụego
Gbakwunye Pop Ahịa na Saịtị Ecommerce gị
Nweta Enyemaka Namgụ Azụmaahịa Gị na Squadhelp